Indlu enomtsalane enendawo ephambi kolwandle, eKungälv, eKode
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguPernilla
I-94% yeendwendwe zakutshanje inike uPernilla iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu epholileyo yonyaka wonke ye-40 sqm kufuphi nehlathi kunye nolwandle. I-cottage ikwindawo efihlakeleyo kunye nemibono emangalisayo yamadlelo akunxweme olusentshona. Apha unokudibanisa iholide yakho kunye nokubhukuda kunye nobomi belizwe, kodwa kusekho ithuba lokuthenga kunye nemisebenzi yedolophu.
Kwinqanaba eliphezulu leplani uya kufumana ibhubhu eshushu yomlilo kunye nendlu encinci ye-attefall ye-15 sqm kunye namacandelo amakhulu eglasi.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo, isitya sokuhlamba izitya kunye nesitovu, itafile yebhara yabantu aba-2.
Phawula! Itafile yabantu aba-4 ikwigumbi lokuhlala
Phelisa ngokuhlwa phambi kweTV kwisofa yethu, onokuthi ube nethuba lokutshintsha ibe yibhedi yabantu aba-2. Ukufikelela kwiTV kunye nefiber. Kwigumbi lokuhlala unokufikelela kwindawo yomlilo kunye netafile enezitulo ezi-4.
Igumbi lokulala 1: 160 ibhedi
Igumbi lokulala 2: Ibhedi enkulu (1x80 kunye ne-1x120cm)
Igumbi lokuhlala: Ibhedi yesofa yabantu aba-2 kunye nebhedi eyi-140cm
Indlu yeeNdwendwe: Ibhedi yesofa yabantu aba-2 kunye nebhedi eyi-120 cm
I-WC & ISHAWEZI / IZIXESHA ZOKUVAMBA
Kwi-cottage kukho ukufikelela kwindlu yangasese.
Ishawa, umatshini wokuhlamba kunye nesomisi ziyafumaneka kwisakhiwo esisecaleni kwendlu.
Apha unendawo egqibeleleyo yokuphumla kwi-idyll yasemaphandleni kodwa usekufutshane nesixeko esikhulu malunga nemizuzu engama-30 ngemoto. I-cottage ibekwe phezulu kwindawo ethandekayo, isasazwa kumanqanaba ahlukeneyo. Yonwabela umbono omangalisayo kweyona ndawo iphakamileyo yesakhiwo apho unokuthatha nebhafu yokuphumla kwibhafu eshushu.
4.86 · Izimvo eziyi-72
Indawo ezolileyo eneentsapho ezinabantwana kunye nezibini ezisele zikhulile
Umbuki zindwendwe ngu- Pernilla
Uhlala wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ngexesha lokuhlala kwakho ukuba kuphakama imibuzo
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$164
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Årsnäs